Uhlaziyo lukaApple iPod nano software | IPhone iindaba
Iindaba ze-IPad | | Izaziso, Iimveliso ze-Apple
Isizukulwana sesixhenxe se-iPod nano sibonile nje ukuba isoftware yayo ifumene njani ukusebenza, ngoku inguqulelo yayo yakutshanje engu-1.0.4. Olu hlaziyo lwasimahla lunokufakwa ngokudibanisa isixhobo kwikhompyuter nge-USB kunye nokufikelela kwi-iTunes njengesiqhelo.
Uhlaziyo alubonakali luzisa naluphi na utshintsho olubonakalayo ekusebenzeni kwe-iPod nano, kodwa umdlali wescreen sokuchukumisa uApple uxhaswe ukuba uhambelane neApple Music. Ke ngoko sinokumisela ukuba olu hlobo lutsha luhlaziyo lwesondlo kunye nesisombululo semingxunya emincinci, ukongeza, eyongeza ukungqinelana neApple Music njengeyona ndawo yayo yomeleleyo.
Omnye wemingxunya esombulula olu hlaziyo ubangele ukuba isicelo seTunes sivale kwiikhompyuter ezinenguqulelo ye-beta yenkqubo yokusebenza ye-Apple OS X El Capitan entsha. Ngaphambi kokuba uhlaziyo luqale ukufaka, usetyenziso lwe-iTunes luvalwe ngempazamo yenkqubo.
Isizukulwana sesixhenxe se-iPod nano sabhengezwa ngokusesikweni nge-12 kaSeptemba ka-2012. Esi sizukulwana sazisa ukungqinelana phakathi kwenkqubo yonxibelelwano yeBluetooth 4.0 kunye nezixhobo ezingenazingcingo esingathanda ukuzisebenzisa ngesixhobo, ezinje ngee-headphone ezingenazingcingo okanye izixhobo zokujonga iintliziyo umsebenzi wezemidlalo. Le iPod nano yamva nje ithengiswa njengeyona iPod nano ibhityileyo phaya, ingamashumi amathathu anesibhozo eepesenti ngaphantsi kobunzulu kunangaphambili. Le yangoku ineemilimitha ezi-5,4 kuphela, xa kuthelekiswa no-8,78 kuguqulelo lwayo lwangaphambili.
Ngeli hlobo, iApple ikhuphe isizukulwana sesithandathu se-iPod touch, ukongeza ukongeza inani lemibala emitsha kuluhlu lwe-iPod nano. Ngaphandle kwemibala emitsha, izixhobo zekhompyutha azikhange zibenangxaki okanye ziphuculwe, nokuba kungoyena ulindelwe ngabasebenzisi: ukwandisa indawo yokugcina yangaphakathi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Uhlaziyo luka-Apple iPod nano software